Sideen Sumacaddeyda Ugu Khaarijiyay Baraha Bulshada ... Iyo Maxaad Ka Baran Laheyd | Martech Zone
Isniin, February 22, 2021 Thursday, April 7, 2022 Douglas Karr
Haddii aan waligey ku faraxsanahay inaan kula kulmo shaqsi ahaan, waxaan si kalsooni leh ugu kalsoonahay inaad ii heli laheyd qof shaqsiyad leh, kaftan badan, oo naxariis leh. Haddii aanan waligey kula kulmin shaqsi ahaan, hase yeeshe, waxaan ka baqayaa waxaad iiga fikirto aniga oo ku saleysan joogitaankeyga warbaahinta bulshada
Waxaan ahay qof xamaasad badan. Waan ku faraxsanahay shaqadayda, qoyskeyga, asxaabteyda, caqiidadayda, iyo siyaasadayda. Waxaan gabi ahaanba jecelahay wadahadalka midkastoo mowduucyadaas ah… marka markii baraha bulshada ay soo ifbaxeen toban sano kahor, waxaan u booday fursada inaan ku bixiyo oo aan kaga hadlo aragtidayda ku saabsan mowduuc kasta. Waxaan si dhab ah u xiiseeyaa sida sababta dadku way rumaysan yihiin waxa ay qabtaan iyo sidoo kale sharaxaadda sababta aan u aaminsanahay waxa aan sameeyo.
Noloshayda gurigeygu ku soo koray waxay ahayd mid aad u kala duwan. Tan waxaa ka mid ah aragtiyada oo dhan - diinta, siyaasadda, nooca galmada, jinsiyadda, hantida… iwm. Aabbahay wuxuu ahaa qof ku dayasho mudan oo cibaado-yaqaan Roman Katoolik ah. Wuxuu ku soo dhoweeyey fursadda inuu qof walba kibis kula kala jabiyo sidaa darteed gurigeennu mar walba wuu furan yahay oo sheekooyinka had iyo jeer waa kuwo xamaasad leh laakiin si xushmad leh ayaa loo ixtiraamaa. Waxaan ku soo koray guri soo dhaweynaya wadahadal kasta.
Furaha kala jebinta rootiga dadka, in kastoo, ay ahayd inaad indhaha ka eegtay oo ay garteen naxariis iyo faham aad miiska la timid. Waxaad ka baratay meesha iyo sida ay ku soo barbaareen. Waad fahmi kartaa sababta ay u rumaysteen waxa ay sameeyeen iyagoo ku saleynaya khibradaha iyo macnaha guud ee ay ku keeneen wadahadalka.
Baraha Bulshadu Ma Qarxin Sumcaddayda
Haddii aad ii dulqaadatay tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaan ku kalsoonahay inaad markhaati ka tahay hamigeyga aan ugu jiro ka qeyb qaadashada baraha bulshada. Haddii aad wali agjoogtid, waan ku faraxsanahay inaad weli halkaan joogto - maxaa yeelay waxaan jaahilnimo ugu dhex booday baraha bulshada markii ugu horreysay anigoo ku faraxsan fursadda ah inaan dhiso xiriir wanaagsan oo aan si fiican u fahmo kuwa kale. Waxay ahayd barkad gacmeed, marka ugu yar aan idhaahdo.
Fursaduhu waxay ahaayeen haddii aad arki lahayd aniga oo ka hadlaya munaasabad, aniga ila shaqeynaya, ama xitaa aad aniga maqashay oo aad igu dartay saaxiib ahaan kanaal kasta oo warbaahinta bulshada ah… Waxaan sidoo kale kugula xiriiray khadka tooska ah. Kanaalladayda warbaahinta bulshada waxay ahaayeen buug furan - waxaan la wadaagay ganacsigeyga, nolosheyda shaqsiyadeed, qoyskeyga… iyo haa… siyaasaddayda. Dhamaantood rajada isku xirnaanta.
Taasi ma dhicin.
Markii ugu horreysay ee aan ka fekero qorista qoraalkan, runtii waxaan doonayay inaan cinwaan uga dhigo Sidee Baraha Bulshadu u Burburiyeen Sumcaddaydii, laakiin taasi waxay iga dhigeysaa dhibbane aniga oo ahaa mid aan aad u wada-jeclaystay ka-qayb-qaadashadayda dhimashadayda.
Bal qiyaas in aad maqasho qaylo dhaan ka socota qol kale oo ay asxaabtu si xamaasad leh uga doodayaan mowduuc gaar ah. Qolka ayaad ku ordeysaa, ma fahantid macnaha guud, ma garaneyso asalka shaqsi walba, waxaadna ku qeylineysaa aragtidaada jees jeeska ah. In kasta oo dad yar ay qadarin karaan, inta badan indha indheeyaashu waxay si fudud ugu maleynayaan inaad tahay qof jilicsan.
Waxaan ahaa jeriskaas. In ka badan, iyo in ka badan, iyo in ka badan.
Si loo sii adkeeyo arrinta, barmaamijyada sida Facebook dhammaantood waxay aad u jeclaayeen inay iga caawiyaan sidii aan ku heli lahaa qolalka ugu dhaadheer oo leh doodaha ugu daran. Aniguna si daacadnimo ah ayaan jaahil uga ahaa raadadka. Markii aan furay xiriiriyadayda adduunka, adduunku hadda wuxuu arkay wixii ugu xumaa ee dhexgalka dadka kale.
Haddii aan qoro cusbooneysiin (Waxaan ku calaamadeeyaa # dadka wanaagsan) oo aan la wadaagay sheeko ku saabsan qof allabari u bixiyey oo caawiyey qof kale oo bini'aadam ah… Waxaan heli lahaa dhowr iyo toban aragtiyood. Haddii aan ku dhex tuuro qashin cusboonaysiinta siyaasadeed ee cinwaan kale, waxaan helay boqolaal. Inta badan dhagaystayaashayda Facebook kaliya waxay arkeen hal dhinac oo aniga iga mid ah, waxayna ahayd wax xun.
Dabcan, baraha bulshada ayaa aad ugu faraxsanaa inay ka dhawaajiyaan dhaqankeygii ugu xumaa. Waxay ugu yeeraan taas hawlgelinta.
Maxaa Ka Baahan Warbaahinta Bulshada
Maxaa ka maqan baraha bulshada waa macno kasta ha lahaadee. Kuuma sheegi karo markasta oo aan ra'yi dhiibto isla markiibana waxaa la iigu calaamadeeyaa wax ka soo horjeedka wixii aan runti rumaysnaa. Mid kasta oo ka mid ah warbaahinta bulshada ayaa cusbooneysiiya in algorithms-ku uu dhiirrigelinayo riixitaanka iyo jiidaha qabiilooyinka labada dhagaystayaal ah ee weerarka tagaya. Nasiib darrose, aqoonsi la'aantu waxay ku dartaa uun.
Macnaha guud ayaa muhiim u ah nidaam kasta oo la aaminsan yahay. Waxaa jira sabab ay caruurtu inta badan ugu koraan caqiidooyin la mid ah waalidkood. Maaha caqiido gelin, waa macno ahaan in maalin kasta ay waxbartaan oo ay u soo bandhigaan caqiido qof ay jecel yihiin oo ay ixtiraamaan. Aaminsanaantaas waxaa si buuxda u taageeraya waqti ka dib kumanaan ama boqollaal kun oo isdhexgal ah. Isku dar caqiidadaas iyo waayo-aragnimooyinka taageeraya iyo waxyaabahaas la aamminsan yahay. Taasina waa wax adag - haddii aan suurtagal ahayn - in laga soo jeesto.
Kama hadlayo naceybka halkaan… in kastoo taasi ay tahay mid naxdin leh oo sidoo kale la baran karo. Waxaan ka hadlayaa waxyaabo fudud… sida iimaanka awoodda sare, waxbarashada, doorka dowladda, hantida, ganacsiga, iwm. adduunka way ka duwan yihiin iyaga dartii. Taasi waa wax ay tahay in la ixtiraamo laakiin badiyaa kuma jirto baraha bulshada.
Hal tusaale oo aan inta badan u adeegsado waa ganacsi maxaa yeelay waxaan ahaa shaqaale illaa aan ka gaadhay 40 jir. Ilaa aan si dhab ah u bilaabay ganacsigeyga oo aan shaqaalaysiiyo dadka, runti waan ka jahli waayey dhamaan caqabadaha hortaagan bilaabida iyo ka shaqeynta meherad. Maan fahmin xeerarka, gargaarka xadidan, xisaabaadka, caqabadaha ka dhasha lacagta, iyo dalabaadka kale. Waxyaabaha fudud… sida xaqiiqda ah in shirkaduhu ay inta badan (aad) uga daahaan bixinta qaansheegtooda.
Marka, sida aan u arko dad kale oo aan weligood shaqaalayn qofna oo ra'yigiisa ka dhiibanaya khadka tooska ah, dhammaantood waxaan ku jiraa bixinta taayga! Qof shaqaale ah oo sii waday inuu meheraddiisa qabsado ayaa ila soo hadlay bilo kadib wuxuuna igu yidhi, "Weligay ma aan ogayn!". Xaqiiqdu waxay tahay illaa intaad qof kale kabahaaga gasho, adiga oo keliya qabaa waad fahantay xaaladooda. Xaqiiqdu waxay tahay inaadan sii wadi doonin illaa aad halkaas ka joogto.
Sideen U Dayactirayaa Sumcaddayda Baraha Bulshada
Haddii aad i raacdo, weli waxaad arki doontaa inaan ahay qof hawlgal ah, oo ra'yi ka qaba khadka tooska ah laakiin in wadaagiddayda iyo dhaqankaygu ay si aad ah isu beddeleen labadii sano ee la soo dhaafay. Taasi waa natiijada adag ee luminta asxaabta, murugada qoyska, iyo… haa… xitaa luminta ganacsi dartii. Waa tan taladayda ku aaddan horay u socoshada:
Saaxiibbada Facebook waa inay noqdaan Frien Dhab ahds
Algorithms-ka ku jira Facebook waa kuwa ugu xun feker ahaanteyda. Hal mar, waxaan haystay ku dhowaad 7,000 saaxiibadaa on Facebook. In kasta oo aan dareemay raaxo leh ka doodista iyo ka doodista mowduucyo midabbo leh asxaabteyda dhow ee Facebook, waxay kashiftay wararkeygii ugu xumaa dhammaan 7,000 qof. Taasi waxay ahayd wax laga naxo maadaama ay buux dhaafisay tirada cusboonaysiinta wanaagsan ee aan la wadaagay. My Facebook saaxiibadaa si fudud ayaan u arkay xisbiyadii ugu xumaa, xumaa, cusbooneysiinta aniga ah.
Waxaan hoos ugu dhajiyay Facebook ilaa in ka badan 1,000 saaxiibo waxaanna sii wadi doonaa yareynta tiradaas hore u socota. Inta badan, waxaan ula dhaqmaa wax walba sida hadda haddii ay tahay mid caam ah - haddii aan sidaas ku calaamadeeyo iyo in kale. Kaqeyb qaadashadeydu si aad ah ayey hoos ugu dhacday Facebook. Waxaan sidoo kale doonayaa inaan aqoonsado inaan arko dadka ugu xun dadka kale, sidoo kale. Waxaan inta badan gujin doonaa boggooda si aan si dhab ah ugu eego qofka wanaagsan ee ay yihiin.
Waxaan sidoo kale joojiyay isticmaalka Facebook ee ganacsiga. Algorithms-ka Facebook ayaa loo dhisay adiga bixin si aad uhesho cusboonaysiinta boggaaga waxaanan u maleynayaa inay runti shar tahay. Ganacsiyadu waxay sannado ku qaatay dhismo kuwa soo socda ka dibna Facebook ayaa wada jeexjeexay laakiin farriimaha lacag bixinta ayaa laga soo saaray kuwa raacsan… gebi ahaanba lumiyay maalgashigii ay ku sameeyeen daaweynta bulshada. Waxba igama gelin haddii aan ganacsi dheeraad ah ka heli karo Facebook, iskuma dayi doono. Intaa waxaa sii dheer, ma doonayo inaan waligay qatar galiyo ganacsi noloshayda shaqsiyadeed halkaas - taas oo aad u fudud.
LinkedIn Kaliya Ganacsi
Weli waan u furan ahay inaan la xiriiro qofkasta oo saaran LinkedIn maxaa yeelay waxaan kaliya la wadaagi doonaa ganacsigeyga, maqaalkeyga la xiriira ganacsiga, iyo qoraalkayga halkaan. Waxaan ku arkay dad kale oo halkaa kula wadaagaya wixii cusbooneysiin shaqsi ah oo aan kula talin lahaa. Kama dhex geli doontid qolka guddiga oo waxaad bilaabi lahayd inaad dadka ku qeyliso… ha ku sameynin LinkedIn. Waa qolkaaga qolka internetka waxaadna u baahan tahay inaad ku ilaaliso heerkaas xirfadeed halkaas.
Instagram Ayaa Ah Xagasha Ugu Fiican
Ma jiraan wax yar ama dood la'aan, mahadsanid, barta Instagram. Taabadalkeed, waa aragti lagu galay noloshayda inaan rabo inaan si taxaddar leh u daaweeyo oo aan ula wadaago dadka kale.
Xitaa barta Instagram, waa inaan taxaddaraa inkasta oo. Ururinta badan ee bourbon-ka runtii dadku waxay ila xiriireen aniga oo ka walwalsan inaan khamri cabbo. Haddii Instagram-kayga loo magacaabi lahaa “My collection bourbon”, isku xigxiga boorbooyin aan soo ururiyey ayaa fiicnaan lahaa. Si kastaba ha noqotee, boggeygu waa aniga… sharraxaaddayduna waa nolosha ka weyn 50. Natiijo ahaan, sawirro badan oo bourbon ah, dadkuna waxay moodayaan inaan sakhraansan yahay. Oy.
Natiijo ahaan, waxaan ula kac u ahay isku daygeyga ah inaan ku kala duwo sawiradayda 'Instagram' sawirrada awowgeyga cusub, safarradayda, isku daygayga karinta, iyo indho-indheynta taxaddar leh noloshayda gaarka ah.
Dadyohow… Instagram maahan nolosha dhabta ah… Waxaan kusii wadaa sidan.
Twitter waa lakala qaybiyay
Waxaan si furan u wadaagaa on my shakhsi ahaaneed Twitter koontada laakiin sidoo kale waxaan haystaa mid xirfadle ah Martech Zone iyo Highbridge inaan si adag u kala qaybiyo. Waxaan dadka u ogeysiiyaa si kala duwan. Taas waan u ogeysiiyey Martech ZoneXisaabta Twitter-ka aniga wali waa aniga laakiin fikrado la'aan.
Waxa aan uga mahadcelinayo Twitter-ka ayaa ah in algorithms-ku u muuqdo inuu soo bandhigayo aragti dheellitiran oo aniga igu saabsan halkii aan ka heli lahaa qoraalladayda ugu muranka badan. … Doodaha ku saabsan Twitter-ka ayaa laga yaabaa inay sameeyaan liisaska isbeddellada laakiin had iyo jeer ha ku sii riixin durdurka. Waxaan ku hayaa wada hadalada ugu qancsan ee Twitter… xitaa markay ku jiraan dood qiiro leh. Iyo, inta badan waxaan ku macnayn karaa wada hadalka shucuurta ku sii kordhaya eray naxariis leh. On Facebook, taasi waligeed uma muuqato inay dhacdo.
Twitterku waxa ay ii noqon doontaa kanaal adag oo aan ka dhiibto ra'yigayga...laakin waxa aan garowsanahay in ay wali dhaawici karto sumcaddayda. Mid ka mid ah jawaabaha laga soo saaray macnaha guud ee wada hadalka guud ee profile-kayga oo dhan waxay higaamin kartaa burbur. Waqti badan ayaan ku bixiyaa go'aan ka gaarida waxa aan ku wadaago Twitter ka badan intii aan hore u haystay. Marar badan, waligey ma gujin daabacaadda tweet-ka oo hore u soco.
Sumcadda ugu Wanaagsan Miyaanay Lahayn Mid?
Dhanka kale, waxaan u taaganahay cabsida hoggaamiyeyaasha warshadahayda si wanaagsan loo ixtiraamo kuwaas oo leh edeb ku filan oo aan waligood ka istaagin baraha bulshada. Qaar baa laga yaabaa inay u maleeyaan inay taasi tahay xoogaa fulaynimo ah… laakiin waxaan filayaa inay marar badan u baahan tahay geesinimo dheeraad ah inaad afkaaga xidho intii aad naftaada u furi lahayd dhaleecayn oo aad joojin lahayd dhaqanka aynu aragno oo internetka ku sii dardargelinaya.
Talada ugu fiican, murugo leh, laga yaabee in aan waligeed laga hadlin wax muran ah oo la marin habaabinayo ama laga saari karo macnaha guud. Inta aan sii weynaado, waxaan arkaa in badan oo aan arko dadkan oo kobcinaya ganacsigooda, oo lagu martiqaado miiska wax badan, oo ay caan ku yihiin warshadahooda.
Waa xaqiiqo fudud inaan iska fogeeyay dad aan weligey qof ahaan ii kulmin, marna aan goob joog u ahayn naxariistayda, oo aan weligeyna soo bandhigin deeqsinimadayda. Taas awgeed, waxaan ka qoomameynayaa qaar ka mid ah wixii aan ku wadaagay sanadihii la soo dhaafay warbaahinta bulshada. Waxaan sidoo kale la xiriiray dad dhowr ah oo shaqsiyan waan ka raali galiyay, waxaan ku casuumay qaxwo si ay si fiican iila bartaan. Waxaan rabaa inay ii arkaan cidda aan ahay oo aanan ahayn sharka xun ee baraha bulshada ee baraha bulshada ay ku soo bandhigtay. Hadaad ka mid tahay dadkaas… isoo wac, Waxaan jeclaan lahaa inaan qabsado.
Miyaanay ahayn wax laga xumaado in furaha warbaahinta bulshada ay noqon karto in laga fogaado gebi ahaanba isticmaalka?
Xusuusin: Waxaan cusbooneysiiyay doorbidida galmada ee ku wajahan nooca galmada. Faallooyin ayaa si sax ah u tilmaamay la'aanta ka-mid ahaanshaha halkaas.
Tags: douglas karrSumcadda Facebooksumcadda instagramsumcadda ku xidhansumcadda internetkasumcadwarbaahinta bulshadasumcadda baraha bulshadasumcadda twitter
Froala: Ku Wanaaji Barxad-Koobkaaga Tifatiraha Qoraalka WYSIWYG ee Qoraalka Taajirnimada
Feb 22, 2021 markay ahayd 4:47 PM
"Tani waxaa ku jira dhamaan aragtiyada - diinta, siyaasada, dookha galmada, midabka, maalka ..."
Waxaa laguu arki doonaa inaad hadda tahay mid loo wada dhan yahay haddii la adeegsado u jeedka galmada halkii aad doorbidi lahayd. Ma dooranayno inaan toosno, khaniis, ama wax kale. Waa aqoonsigeenna.
Febraayo 23, 2021 saacadu markay tahay 9: 46 AM
Waa qodob aad u wanaagsan, waan cusbooneysiin doonaa maqaalka maaddaama ay hubaal tahay waxa ruuxiisu ahaa.
Febraayo 23, 2021 saacadu markay tahay 9: 26 AM
Runtii waan jeclahay inaad waxan qortay. Waxay ku tusaysaa inaadan dhab ahaan waxba baran. Aragtidaadii shirqoolka ahayd, nacaybkaagii, iyo nacasnimadii guudba waxay ahayd dhibaatada. Warbaahinta bulshada maahan cadowga (sidaad tilmaantay) waa runti inaad tahay qof neceb… Xusuusnow fariintaas oo aad si jilicsan ugu dhahday "u hel xabagta gorilla qaarkeed" oo ku saabsan daadinta shucaaca ee Japan? Waxaan xasuustaa… waxay ahayd 10 maalmood kahor. Waxaan rajeyneynaa in sumcaddaadu ay kusii socoto wadadaas.
Febraayo 23, 2021 saacadu markay tahay 9: 44 AM
Zack, waad ku mahadsan tahay faalladaada. Waxaan u maleynayaa inay taageerto maqaalkayga iyo aragtida warbaahinta bulshada sidoo kale waxaad si cad u aragtaa aragti xun aniga aniga halka asxaabteyda, macaamiishayda, iyo asxaabteydu aysan sameynin. Wanaag baan kuu rajaynayaa.
Febraayo 26, 2021 saacadu markay tahay 1: 22 AM
Cajiib! Doug maxaa maqaal weyn ah oo ay ku xardhan yihiin aragtiyo ku saabsan waxyaabaha ay tahay inaan dhammaanteen si gaar ah uga feejignaano shaqsi ahaan. Laakiin sida aad sheegtay, muhiimada ay leedahay in la sameeyo taas marka la isku dayayo in la isku dheellitiro qof ahaanta iyo waliba socodsiinta ganacsi khadka tooska ah ayaa xitaa ka sii adag oo qalloocan!
Waxay umuuqataa adiga iyo aniga inaan kubilaabnay xiriirkan khadka tooska ah iyo kan khadka tooska ah midba midka kale sanado badan kahor hada, waxay umuuqataa inay waligeedba jirtay. Koobab badan oo kafee ah makhaayado kala duwan iyo meherado jidka ku jira. Wax dambi ah kuma lahan mid ka mid ah saaxiibbadayda kale maalmaha Circle City, kaaga ayaa ah midka ugu badan ee aan ka qoomameynayo inaan aad uga fogahay juqraafi ahaan mana wadaagi karno kafeega, doodaha, doodaha, qosolka iyo haa, laga yaabee xitaa bourbon si joogto ah.
Halkan waa adiga, ganacsiyadayada iyo baraha bulshada. Miyaan sii wadi karnaa inaan si taxaddar leh u dhex marno biyahan isla markaana aan ka caawinno hagidda macaamiisheenna si nabadgelyo leh inta u dhexeysa xeebta sidoo kale!
Feb 26, 2021 markay ahayd 3:57 PM
Mahadsanid! Had iyo jeerna waa qadarinnay saaxiibtinimadeenna.